European Union ichaongorora Apple nezve zvichemo zvekukwikwidza kweSpotify | IPhone nhau
Mumwedzi mishoma tichakwanisa kuyedza nyowani Apple TV +, vhidhiyo nyowani yekushambadzira sevhisi kubva kuvakomana kubva kuCupertino iyo yavanoda kugadzirisa iyi musika inotungamirwa naSpotify. Musika uyo pasina mubvunzo unotungamira vakomana veCupertino kuhondo nyowani dzekushambadzira, Hondo nyowani ine mavhoti akawanda kuti ipere sezviri kuitwa nehondo pakati paApple naSpotify mumusika wemimhanzi wekutenderera.
Uye ndeyekuti hondo yemimhanzi iri kuenderera kuburitsa nhau nhasi, chinhu chekupedzisira chatakataura nezvacho chichemo chepamutemo icho Spotify chakamhan'arira kuEuropean Union kumakwikwi emuviri. Uye zvinoita sekunge kuferefetwa kuri kuenderera netsoka ... Takangozviona izvo mutumbi unokwanisa weEuropean Union mumakwikwi wagamuchira chichemo chaSpotify uye ave kuda kuongorora vakomana veCupertino nekuda kwekufungirwa uku kwekukwikwidza. Mushure mekusvetuka tinokupa iwe zvese zvekupokana uku kutenderedza Apple uye Spotify
Yakaburitswa nevakomana kubva Nguva Yekupedzisira. Vanoti iyo European Union iri kuunganidza data rekuti Apple inokwikwidza sei kukwikwidza mumashandisirwo ayo uye mukupihwa kwemasevhisi edigital avanopa kune avo vashandisi. Kuferefeta uko, sekutaura kwedu, Izvo zvakazvarwa kubva mukunyunyuta uko vakomana veSpotify vakamhan'arira neEuropean Union yemakwikwi emuviri. Ehezve, kubva pane zvakaitika mune zvimwe zviitiko, rudzi urwu rwekuferefeta kazhinji runotora nguva yakareba, ndosaka zvichiratidzika kuti tichazomirira nguva yakareba kuti tione sarudzo yekupedzisira yeEuropean Union.
Tichaona kuti izvi ndezvei, hatifanire kukanganwa kuti kunyunyuta kwako vakomana veSpotify vari kukura mune vanobhadharwa kunyoresa uye vatove nevanopfuura mamirioni zana vanyoreri kubhadhara, manhamba ayo Apple anogona kurota nezvawo. Tichaona, tichaona kuti izvi zvese ndezvipi, ndinofunga Apple ichaguma yapinda nepasi uye ichikundwa nezvikumbiro zveEuropean Union.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » European Union inoferefeta Apple yeSpotify kukwikwidza kukwikwidza